စီးယက်စ် Cius (သို့) - Enterprise Android Tablet by Cisco
Android ဆိုတာ စွယ်စုံ သုံးလို့ရတယ့် OS တစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့် သေးငယ်ပေါ့ပါးတယ့် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေ အတွက် တော်တော်လေး အသုံးဝင်ပါတယ်။ မိုဘိုင်း ဖုန်းတွေမှာ စတင်ခတ်စားရာကနေ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ tablet တွေမှာပါ တော်တော်လေး အသုံးပြုဖို့ စတင်နေပါပြီ။ Android ကို အသုံးပြုတယ့် tablet အများအပြားကို အခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့ နောက်နှစ်ဦးပိုင်း လောက်မှာ ဈေးကွက်ထည်းမှာ တွေ့မြင်ရတော့မှာပါ။ဆက်သွယ်ရေး နာမည်ကြီး company… Continue
Added by Jake on June 30, 2010 at 10:30pm —
Web Design အခြေခံ သဘောတရားအချို့
ဤ Post သည် Web Development အကြောင်း ဖြစ်သည့်အတွက် Web Application, Web User Interface, Web Usability, Web Designer, Web Developer စသည့်စကားလုံးများအား ဖတ်ရလွယ်စေရန် Web ဟူသည့် စကားလုံးကို ထည့်သွင်းရေးသားခြင်း မပြုတော့ပါ။ ဖြည့်စွက်ဖက်ပါရန်။
Web Site ဒါမှမဟုတ် Web Application တစ်ခုဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူပေါင်းစုံကအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မည်သူမဆို အသုံးပြုနိုင်လောက်အောင် အသုံးပြုရ လွယ်ကူစေဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် Web Application… Continue
Added by Ei Maung on June 30, 2010 at 4:00pm —
No Comments How to write comments.php in Wordpress Theme
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ theme ကိုပိုမိုပြည့်စုံအောင် comments.php ဆိုတဲ့ file ကိုဆက်ရေးကြတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အရင်ရေးထားတဲ့ အထဲမှာ comments.php file မပါပါဘူး။ ဒါပင်မယ့် comments လည်းပေးလို့ရသလို ပြလည်းပြပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ theme မှာ comments.php file မပါရင် \_wp-content\_themes\_default အောက်က comments.php ကိုယူသုံးပါလို့ Wordpress ကရေးထားလို့ပါ။ အခုကိုယ့် comments file ကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်စရေးကြတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီ file ကိုသုံးပိုင်းပိုင်းထားပါတယ်။… Continue
Added by Wai Lynn Oo on June 24, 2010 at 7:00pm —
Networking group မှာဆွေးနွေးခဲ့တယ့် IDS/IPS အကြောင်းကို ဒီမှာ နည်းနည်းလောက် ပိုပြီးပြောပြချင်ပါတယ်။ IDS/IPS အဓိပါယ်ကို မြန်မာလို မပြန်တော့ပါဘူး။ တကယ်တော့ IDS/IPS မှာ host-based နဲ့ network-based ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Host-based ကတော့ server (သို့) client ကွန်ပျူတာ တွေပေါ်မှာ install လုပ်ထားလေ့ရှိတယ့် software ပါ။ သူက virus, malware နဲ့ spyware တွေက ကွန်ပျူတာရဲ့ system နဲ့ တခြား application တွေကို မဟုတ်တာ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားတယ့်အခါ user ကို သတိပေးပြီး ကာကွယ်ပေးတယ့် software မျိုးပါ။… Continue
Added by Jake on June 23, 2010 at 11:42am —
ယနအေ့ခါ　မညျသူမဆိုအသုံးပွုနကွေတဲ့　Internetသညျလညျး၊　Wright ညီအကိုကလယေဉျပြံကိုတီထှငျခဲ့သလို　တညျထှငျခဲ့သူမြား　ရှိခဲ့ပါသညျ။　Webနညျးပညာဖွငျ့　အသကျမှေးနသေူဆိုလြှငျ　အနညျးဆုံး　Webနညျးပညာက　ဘယျလိုမြိုးမှေးဖှားလာခဲ့သညျ　ဆိုသညျကိုသိရှိထားသငျ့ပသေညျ။　wwwကိုစတငျ　တီထှငျခဲ့သူမှာ　အင်ျဂလနျနိူငျငံသား　Sir Timothy John Berners-Leeဖွဈ၏။ ကြောငျးသားဘဝတှငျ　သူသညျ　ရူပဗဒေဘာသာရပျကို　အဓိကယူခဲ့ပမေယျ့၊　… Continue
Added by Min Lwin on June 21, 2010 at 8:00pm —
Detail In Wordpress Template Tag
ကျွန်တော်တို့ Wordpress theme တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါ Template tag တွေကိုသုံးရပါတယ်။ Template tag ဆိုတာဘာလဲ?Template tag ဆိုတာ wordpress ကို "ဘာလိုချင်တယ်" "ဘာလုပ်ချင်တယ်" ဆိုပြီးတော့ ညွှန်ကြားနိုင်တဲ့ code တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ။ ။ <?php bloginfo('name'); ?> ဆိုရင် wordpress ကနေပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog name ကို return ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ php tag <?php ?> ကို ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပါ။ wordpress ဟာ php language နဲ့ရေးထားတဲ့ အတွက် php tag ထည့်ပေးရပါတယ်။… Continue
Added by Wai Lynn Oo on June 21, 2010 at 2:56pm —
Java ကို​အမွနျ​ဆုံး​လေ့​လာ​ခွငျး (1)
Added by Min Lwin on June 20, 2010 at 11:00am —
XMLဆီသို့ခွလှေမျးမြား　အနနေဲ့သညျအခနျးဆကျကိုရေးသားလာခဲ့သညျမှာ　သညျအကွိမျနှငျ့ဆိုလြှငျ　၃ကွိမျမွောကျရှိလာပါပွီ။ တနထေ့ကျတဈနေ့　ဘာရေးရငျကောငျးမလဲ၊ဆိုပွီးအမွဲစဉျးစားနတေကျပါသညျ။ကြှနျတျောအတှကျလညျး　အလှနျကောငျးပါသညျ။　အလုပျထဲမှာလိုအပျလာလြှငျ　နညျးပညာအသဈမြားကိုလလေ့ာရပါသညျ။ သို့ရာတှငျရေးလို့ရပွီးရော　ဆိုပွီးကြျောဖတျသှားလရှေိ့ပါသညျ။ဤအခနျးဆကျကိုရေးသားရငျး　အသေးစိတျကိုပို၍　သိခငျြလာပါသညျ။　ပို၍လညျး　တငျပွခငျြလာပါသညျ။　အဲ့ဒီအတှကျလညျး　ပို၍လလေ့ာမိပါသညျ။　ဆကျလကျရေးသားသှားပါဦးမညျ။… Continue
Added by Min Lwin on June 18, 2010 at 5:30pm —
Working on Ayar -- Finally Fixed the Help Keyboard, Dealing with Physical Keys, & More
Good evening everyone,Lately, I've been working on implementing support for Ayar. This was very challenging, because Ayar contains an Input Method, an Encoding, andaDisplay Font. I just sentademo to the testing team, and so far it's been received positively.However, before I released the demo on MMIT Pros, I wanted to fix the Help Keyboard, sincealot of you keep reporting that it's broken. I finally got it to… Continue
Added by Seth Hetu on June 18, 2010 at 5:00pm —
Myanmar IT Pro in area51
Support Q&A site for Myanmar IT
professionalsWeb Applications ကတော့ commit stage ကို ရောက်နေပြီ။ Myanmar IT Pro ကဘယ်လိုလဲ။ ခုဆို မေးခွန်း ၅ ခုစီဘဲ လိုတာပါ။ မေးခွန်းတစ်ခု like လုပ်တာ အခါ ၂၀ ပြည့်ရင် on/off-topic မေးခွန်းအတည် အနေနဲ့ ဖြစ်လာမှာပါ။ မေးခွန်း ၅ခု စီ ရမှ ရှေ့ ဆက်လို့ ရမှာပါ။ အားလုံး… Continue
Added by Kyaw Zin Hein on June 17, 2010 at 12:19pm —
No Comments web blogger တို့ ၏ ဒုက္ခ
web blogger အင်း.......ကျွန်တော်တို့ လို web blogger တွေဟာ ကိုယ်သိတာလေးတွေ ကိုမျှဝေဖို့ ၊ social site လေးတွေတည်ထောင်ဖို့ ၊ အချင်းချင်းပျော်ပျော်ပါးပါး နည်းပညာလေးတွေ၊ အကြောင်းအရာလေးတွေ၊ ထွေရာလေးပါး ရောက်တက်ရာရာ လေးတွေကို ဆွေးနွေးကြဖို့ ၊တစ်ရောက်ရဲ့ပြဿနာကို ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းကြဖို့ ရသမျှ free web hosting တွေကိုလိုက်ရှာ (ပိုက်ဆံမှမရှိတာ) အချိန်ကုန်ခံ internet ဖိုးအကုန်ခံ (လိုင်းမှမကောင်းတာ) ပြီးရေးကြရတယ်။ web Blogger တွေကဘာရသလဲ?..... ဘာမှမရပါ။ တခါတလေ ကိုယ့်ဘက်ကဘက်လောက်လုပ်လုပ်… Continue
Added by roger1942 on June 16, 2010 at 8:00pm —
The answer to "what is the best ORM product in .NET realm?" remains controversial when it comes to individual preference. The following blogs post isagood place to find out statistical information on the performance benchmark of popular ORM suites; NHibernate, Subsonice, Entity Framework etc. http://ormbattle.net/ Added by Kyaw Thurein on June 12, 2010 at 10:21pm —
ယခငျ အခွေ​ခံXMLနှငျ့​ပတျသကျ​ပွီးဖျော​ပွ​ခဲ့​ပါ​သညျ။　XMLဆို​တာ​ဘာ​လဲ၊　ပွီး​တော့XMLကို​ဘယျ​လို​ရေး​ရ​မ​လဲ　ဆို​တဲ့​အခကျြ​လောကျ​တော့　တညျး​မိ​ခေါကျ​မိ​လိမျ့​မညျ​ဟု​ထငျ​ပါ​သညျ။ရေးသား​ရငျး　သညျ​ထကျ​ပို​ပွီး　သိ​ခငျြ​ရေး​ခငျြ​လာ​ပါ​သညျ။　ပို​၍​ရေး​ခငျြ​လာ​ပါ​သညျ။XMLဆီ​သို့​ခွလှေမျး​မြား　ဆို​တဲ့​ခေါငျးစဉျ​နဲ့　ဆကျလကျ​ရေးသား​သှား​ပါ​မညျ။　မွနျမာ​အိုငျ​တီ​ပ​ရို ဘ​လောဂျ​၏ လကျ​ရှိ Setting အရ PDF Embeded မြား​ကို ဖျော​ပွ​၍ မ​ရ​နိုငျ​သော​ကွောငျ့ နောငျ​ရကျ​မြား​တှငျ HTML စာသား​မြား​အဖွဈ… Continue
Added by Min Lwin on June 12, 2010 at 2:30pm —
Simple Online Book Store [ Source Code ]
Too lazy to read article? - Download Now!PHP ဟာ General Purpose Scripting Language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Rasmus Lerdorf လို့ခေါ်တဲ့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသား Programmer က ၁၉၉၅ ခုနှစ်… Continue
Added by Ei Maung on June 10, 2010 at 5:00pm —
မြန်မာ PC hardwares web site သစ်
မြန်မာ့ကွန်ပျုတာ ဈေးကွက်နှင့် မြန်မာ့ကွန်ပျုတာ hardware လောကတိုးတက်စေရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ www.freemanhardwares.webs.com ကိုလွှင့်တင်ထားပါတယ်။ ဒီ site မှာ computer hardwares များအကြောင်းကို အဓိကထား၍ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုမှစပြီးလွှင့် တာဆိုတော့ လိုအပ်ချက်တွေတော့ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတက်နိုင်ဆုံးရေးသားဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါလို.တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။ Added by Ko Thu on June 8, 2010 at 10:28pm —
မနေ့ကညက မအိပ်ပဲ WWDC 2010 Live blogging ကို Engadget ကနေ ထိုင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ Steve Jobs ကြေညာမယ့် iPhone အသစ်ရဲ့ availability date ကို သိချင်တာပါ။ iPhone အသစ် ဘယ်လိုပုံစံ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဗီယက်နမ်က ပေါက်ကြားခဲ့တယ့် သတင်းတွေထဲက မြင်ထားပြီးဖြစ်လို့ သိပ်ပြီး မထူးစမ်းတော့ပါဘူး။ ဒီနှစ်နဲ့ဆို WWDC တိုင်းမှာ iPhone အသစ်တွေ ကြေညာတာ ၄ နှစ် ဆက်တိုက်ရှိပါပြီ။iPhone အသစ်ကို iPhone4လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် 4G လို့မခေါ်ပါဘူး။ ဒီတခါတော့ 3GS… Continue
Added by Jake on June 8, 2010 at 2:02pm —
Blog Forum များမှ ပုံများ တပြိုင်တည်း ဒေါင်းခြင်း (Imagehost Grabber)
ကျွန်တော်တို့ဟာ Forum တွေ Blog တွေမှာ ပုံတွေကို တင်တဲ့အခါ မူရင်းပုံတွေကို သူတို့ရဲ့ ပင်မ server မှာ တင်လေ့မရှိဘဲ image hosting တွေမှာ သွားပီး တင်ကြပါတယ် ။ ပီးမှ အဲဒီပုံရဲ့ thumbnail link ကို form မှာ တင်ကြတာများပါတယ်။ image တင်တဲ့နေရာမှာ imageevenue,imagebam,imageshack စတဲ့ free image hosting တွေကို သုံးပြီး တင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် hosting တွေက သူတို့မှာတင်တဲ့ပုံတွေကို direct link နဲ့ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘဲ html page တစ်ခုကို ညွန်းကြတာများပါတယ်… Continue
Added by smart1500 on June 8, 2010 at 2:30am —
No Comments အခွေ​ခံ　XML
1 ပဋ်ဌ​မ​ခွလှေမျး　အခွေ​ခံ XML
XMLဆို​သညျမှာ　TAGတှေ​ကို​အသုံးပွု​ပွီး၊　စာ​ပိုဒျ​တဈ​ခု​ရဲ့​ဖှဲ့​စညျး​ပုံ​ကို　စနဈ​ခြ​ရာ​မှာ​အသုံးပွု​သော　စနဈ​တဈ​ခု​ဖွဈ​၏။ XMLသညျမ​ရရော​သော　ရေး​သား​ပုံ​စနဈ​ကို​လကျမ​ခပဲ၊　တငျး​ကပျြ​တဲ့​စညျးမဉျြး​တှေ​နဲ့　စာရေး​သား​ပုံ​စနဈ​ကို သတျ​မှတျထား​သညျ့​အတှကျ　Program မြား​မှ　အသုံးပွု​ရ​လှယျကူ​စသေော　ထူးခွား​မှု့​ကို​ပိုငျဆိုငျ​၏။… Continue
Added by Min Lwin on June 6, 2010 at 5:00pm —